ओली सरकारमा सहभागि हुने देउवाको तयारी, गृह मन्त्रालय आफूसँगै किन राख्दैछन् ? - Rising Dainik
April 17, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on ओली सरकारमा सहभागि हुने देउवाको तयारी, गृह मन्त्रालय आफूसँगै किन राख्दैछन् ?
काठमाडौँ / नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले सरकारलाई जोगाउने कसरतमा लागेका छन् । माओवादी केन्द्र र जसपाको एक धारले पटकपटक उनको राजिनामा माग्दै आएको छ ।
नेकपा एमालेकै माधव नेपाल पक्ष पनि उनीसँग असन्तुष्ट भएर समानान्तर समितिहरु बनाइरहेको छ । यसैबीच, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बलियो र निर्णायक शक्तिका रुपमा देखिएको नेपाली कांग्रेसमा पनि दुई धार देखा परेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा ओलीसँगै सहकार्य गरेर चुनावमा जान चाहान्छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष नेकपा माओवादीसँग सहकार्य गरी ओली सरकार तत्काल ढाल्ने मनसि्थतिमा देखिएको छ ।
देउवाको चाहाना भने फरक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा जतिसक्दो चाँडो चुनाव गराएर आफ्नो सरकार बनाउने दाउमा सभापति देउवा छन् ।
उनले चुनावमा हुने सम्भावित धाँधली रोक्न गृह मन्त्रालय आफूसँगै लिएर ओली सरकारमै सहभागी भएर चुनाव गराउने विकल्पमा पनि छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । देउवा पार्टीमा आफू कसरी बलियो हुने र आउने महाधिवेशनमा कसरी सभापतिको पद जोगाउने भन्ने कुरामा चिन्तित रहेको र सोहीअनुसार आगामी कदम चाल्ने मुडमा देखिन्छन् ।
देउवा यस्तै सोचिरहेको कांग्रेस वृतमै चर्चा हुने गरेको छ ।
उहिले भैंसीको ढा’डमा चित्र कोर्थे, अहिले सौराहा सिँगारे
रामकुमारी झाक्रीलाई एमाले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि नि’स्कासित गर्न माग
March 9, 2021 March 9, 2021 Ramash Kunwar